CR7 Oo Si Kulul Uga Jawaabay Wararka Sheegaya In Laga Diiday Bixinta Lacag Si Uu Xabsi Uga Badbaado %
Mar sii horeysay oo maanta ah Majalada El Mudo ee kasoo baxda wadanka Spain, ayaa waxa shaacisay in weerar yahanka Real Madrid, ee Crsitiano Ronaldo, laga soo diiday dalab ahaa inuu bixiyo lacago kaash ah si uu uga badbaado inuu xabsi galo.
Arrintaan oo salka ku haysa kadib markii lagu soo oogay Ronaldo dambi ah inuu la dhuuntay lacago Canshuur ah, taasoo xafiiska xeer-illaalinta Spain, ay sheegeen in CR7 uu ku muteysan dambigaas hadii uusan qiranin xabsi muddo dheer ah.
Laakiin, Ronaldo, ayaa wuxuu isla-markiiba uu kasoo jawaabay warka kasoo yeeray El Mundo, isagoona ku tilmaamay warar aan sal iyo baar toona lahayn.
Fariin uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Instagram-ka ayuu ku yiri: “Ha isku deyin inaad ku bedashid waqtiga qurux badan ee aan hada ku noolahay warar been abuur ah.
Sikastaba, Ronaldo ayaa wuxuu hada yahay gooldhaliyaha ugu badan marka laga hadlo kaliya sanadkaan 2018, isagoona shabaqa soo taabtay 21 jeer 13 kulan oo uu dheelay.
Laacibkaan ayaa wuxuu uyahay furaha koowaad marka laga hadlo guulaha naadiga Real Madrid, isagoona dhaliyay Afar gool, kulankii ay Axadii kusoo dar-dareen dhigooda Girona 6-3, waxaana uu markaas dhaliyay Saddexleydiisii 50aad.